Alshabaab oo Buulo mareer kula dagaalantay ciidamo faransiis ah oo diyaarado wato | Somalisan.com Home
Alshabaab oo Buulo mareer kula dagaalantay ciidamo faransiis ah oo diyaarado wato
1/12/2013 7:24:00 A
Wararka ugu horeeya ayaa sheegaya in diyaaradahaasi ay ku degeen guri lagu hayey sarkaal u dhashay wadanka Faransiiska oo sanadkii 2010 ay afduubteen ururka Al Shabaab.
Warar goordhow soo baxay ayaa sheegaya in xalay saqdii dhexe saddex diyaaradood oo nooca ciidamada ay adeegsadaan ah ay weerar ku qaadeen guri ay deganaayeen xubno ka tirsan arakada Al Shabaab oo ku yaalla degmada Buulo Mareer oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Wararka ugu horeeya ayaa sheegaya in diyaaradahaasi ay ku degeen guri lagu hayey sarkaal u dhashay wadanka Faransiiska oo sanadkii 2010 ay afduubteen ururka Al Shabaab sida warku sheegayo.
Dagaal iska horimaad ah ayaa la sheegayaa inuu dhexmaray dagaalyahano ka tirsan Al Shabaab oo goobta waardiye ka hayey iyo ciidamadii diyaaradaha watay oo Faransiis ahaa.
Dad deegaanka ku sugan oo aan rabin in la magacaabo ayaa sheegay in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac ka dhashay weerarkan xalay saqdii dhexe ka dhacay degmada Buulo Mareer, iyadoo saaka ciidamada Al Shabaab ay xireen goobta weerarku ka dhacay.
Illaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka Al Shabaab iyo dawlada Faransiiska oo ku aadan weerarkan iyo in ninkii Faransiiska ahaa ee u afduubnaa Al Shabaab lagu furtay weerarkan xalay dhacay.